Ụbọchị My Pet » The Dog Walker
site Leslie Schnur
emelitere ikpeazụ: Jul. 03 2020 | 10 min agụ
Nina nwere ịhụ Daniel. Ọ nọ na-aga na-ehi ha mpi, ma ọ bụ karịa n'ụzọ dabara adaba, nkịta ha leashes, ma na-ya zuru ezu anya, ọbụna ma ọ bụrụ na o nwere na-eme ka a ngụkọta nzuzu nke onwe ya, nke bụ, ọtụtụ n'ezie, apụghị izere ezere.
N'ihi ya, ọ zubere a pụrụ iche na nkịta-eje ije omume. Taa, kama agwakọta ya ụzọ ọ na-emekarị mere, na nkịta nile di iche iche, o mere ndokwa jide a obere obere Yuppie-nkịta fest. Ọ na-ada ụfọdụ ụma ya oge na ụfọdụ finagling na Suki, ọzọ nkịta walker ọ maara si nkịta ọsọ onye klientele yiri ka nkịta nke cutesy, obere dịgasị iche iche na ndị na ji Nina site na mgbe mgbe ọ gara Hawaii na a akpatre minit whim na jụrụ Nina dejupụta ya.
Nina apụghị ịmata ihe dị iche n'etiti ndị a nkịta ma ha nwere pụrụ iche markings, dị ka Stella si efu ekpe ntị, ma ọ bụ Sie si nkwocha kwachie na-ekpe-ya hip. Iji ya, ha niile bụ ndị obere obere nkịta, ma e wezụga n'ihi Cockapoos, nke n'ezie ndị na-adọrọ mmasị na smart, ma ihe ọzọ ị na-atụ anya si mutts, nke bụ ihe Cockapoos n'ezie bụ. Dị Ọcha bred obere obere nkịta na-adịghị ekesịpde zipụ ndị na-eche banyere ha dị ka mara mma ngwa, n'ihi na ha na obere na i nwere ike na-ha na ụgbọelu ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ. (O mere bụghị, Otú ọ dị, ekpe ikpe ndị nwere otu n'ihi na ọ bụ hypo-allergenic. Nke ahụ bụ ike na ihe mere, nanị na-anabata ihe mere aka ndị dị otú ahụ a na nkịta.)
Ma ọkọ ọ bụla nwe a obere obere nkịta na ị ga-ahụ a psychotic nne na nna na-ekwere na ha na ìgwè bụ pụrụ iche na pụrụ iche, na buuru gị na ihe dị iche, n'ụzọ zuru ezu na, n'etiti a Bichon na a Maltese, banyere nke, n'ezie, Nina nwere ike inye a na na na.
Ma, anya na-ekwu okwu, dị ka a mkpọ, ha bụ ndị a n'anya. Ọ naara ha ka ha na-esite, enwe olileanya na ha ga-agba n'ime Daniel. Ọ maara na ọ gbara ọsọ kwa ụtụtụ na dị nnọọ ka o wee. Nke a ụtụtụ na ọ juputara na igwe mmadụ, ọbụna n'elu ịnyịnya ụzọ na ọ na-eji maka nkịta. Onye ọ bụla na-achọ ya na, ọchị, nrụaka, na kemmato n'anya. Ma Chineke machibidoro ọ na-eji jogging nzọ ụkwụ elu nsu. Joggers ndị pụtara motherfuckers mgbe ọ bịara nkịta, nwa strollers, igwe ịga ije ma ọ bụ ọbụna oche nkwagharị, na ọ nwere ike na-alụso ọgụ na nke a ụtụtụ, karịsịa yi ndị a mara mma ọhụrụ akpụkpọ ụkwụ nke e egbu ya.
Dị ka ha rutewere ọwara na ndịda n'ọnụ nke na-esite, a maara nkịta kpatara nke ọchịchịrị. Ọ bụ Sid. Oo Chi M Akpọọ M Ọkụ, chere Nina, dị ka ọ na bounded ogologo ya, ebe a ọ na-abịa. N'ihi na ebe e nwere Sid, e Daniel. Ma obi ya malitere iti otu narị thumps a abụọ, na a n'amaghi ọchị hụrụ ya ụzọ n'elu ya ihu, dị ka ya n'aka wee ruo larịị ntutu isi ya, na mgbe ahụ kwatuo ya uwe elu, hichapụ ajirija si ya ihu.
Mgbe ahụ, ọ hụrụ ya. Na a t-uwe elu na nịịka, ntutu dị enye ama dị nnọọ akpọrepu nke bed, jogging na ekweisi na a MP3 ọkpụkpọ na aka-ekpe, uche ya n'ụzọ doro anya na music. Ọ efehe n'ebe ya na-enweghị hụrụ ya.
Ruo mgbe o mere. Ọzọkwa, a ọnụ ọchị tiwapụrụ gafee ihu ya, na-eme ka anya ya crinkle, ya cheeks dimple. Ọ bụ ike na-atụ uche. Ọ nọ na gburugburu iri na otu obere obere nkịta, ụdị ndị na-achọkarị ebu na coddle. Ọ na-ele anya dị ka ihe ọma na ngbasi nke dị n'ebe ugwu, gbara ya gburugburu bichons kama munchkins. Ma o yi a nnọọ mkpụmkpụ uwe kama ya na mbụ nịịka na a ụdị ịbanye peasanty uwe elu nwanyị kama ya na mbụ adọwa mahadum t-uwe elu na chi m achọ ịma iru ala akpụkpọ ụkwụ kama ya akpụkpọ ụkwụ.
“Daniel!” ọ efe ya.
Ọ gawa n'ebe ya, n'ihi na oge ọ na-agaghị ebe ọ bụla. Ndị nkịta n'ụzọ nkịtị na-agba ọsọ okirikiri gburugburu ya. Ma eleghị anya, ọ ga-ada (ọ bụghị na ọ na-enwe olileanya na-afụ ụfụ) o ga na-eburu ya elu (ma nke a ga-abụ ihe ọjọọ).
“Hey Nina.” Ma dị ka ma ọ bụrụ na site uche, ọ ghọrọ oké njọ, fọrọ nke nta etak ubom. Ọ bụrụ na ọ na-amaghị mma, ọ ga-na-na na chere na ọ na-were ya iwe. Ndi enye maara na ọ nọ na-ulo n'ebe ọ gaghị enwe? Dị ka ọ bịakwutere ya, ya o we ekweisi apụ, ka ha kpọgidere ya n'olu. Ọ pịrị kwụsịrị MP3 ọkpụkpọ.
“Dị ka gị entourage. Gịnị ka i nwere n'ebe, iri bichon frieze?” jụrụ Daniel. Ọ mụmụrụ ọnụ ọchị, dị ka o wee dị ka nso ya dị ka o nwere ike, nyere ndị gbara ya gburugburu agha.
“M masịrị. Ma n'ezie, M nwere n'ebe a otu bichon, onye a ebe a, Star. Nke ahụ bụ Zardoz, a bichon / yorkie mix, n'ebe peeing n'elu oké nkume. M abụọ n'ụgbọ-poos, Sam na Dave, nri n'ebe ahụ obere pink ụta, Efere, na cockapoo, Jackie O. na Jọn F., abụọ owu Tulears. Ọzọkwa, Annie, na lhasa apso, nkịta si hell. Ị ma nke mere? Ọ na-eyi a doggie metụ akwa mgbe ọ bụ n'ụlọ. Ọ bụghị na-egwu egwu. Na ndị na-atọ malteses? Nke ahụ bụ Larry, Mgbakọ na Moe. Iri na otu yuppie nkịta niile n'usoro.”
“Olee otú ị pụrụ ịgwa? Ònye bụ onye, Echere m. Ha niile anya myiri m.”
“Ị doggist ị! Na adịghị ekwu ësome nke gị mma enyi are'Ö”
Ọ chịrị ọchị, dị ka ọ na-ele anya ala. Ya mbo ụkwụ e ese a gwụrụ pink ezie na ụkwụ ya bụ ndị a obere gnarly na arched, enye ama ese siri na ọmarịcha tụnyere ya na mbụ anya nke biker-girl-na-nkịta. Ọ bụghị n'aka na nke anya na o nwere mmasị mma.
“Ọ dịghị akpụkpọ ụkwụ.”
Nina bụ anya na ụtọ, ọ nwere ike na-ejisike nwere onwe ya. “Ị chọpụtara. Echere m–“
“Ọ dịghị University t-uwe elu.”
Ọ na-arụ ọrụ, Nina chere na ya onwe ya. O chere a tug na ya leashes. 'Ịmụrụ mmadụ nile. Dị nnọọ anọ otu nkeji, biko.”
“Ị dị ụtọ n'anya.”
Nina ele anya ala na ya na mkpịsị ụkwụ ahụ azụ ruo Daniel. “Daalụ. Ya mere ị na-. M meanÖ”
“Ma ọ wee na-ike na-eje ije na ndị akpụkpọ ụkwụ.” O lere ụkwụ ya na ha strappy akpụkpọ ụkwụ na mgbe ahụ ya iferi ụkwụ na mgbe ahụ n'ime ya anya. Ọ hụrụ ya na-ahụ ya, o blushed.
“Ọfọn, M mma na-ndị a nkịta ije na ebe obibi.” Ndi enye ama a ngụkọta onye iberibe? N'ihi gịnị ka o chetara ya ihe ya na-arụ ọrụ? The nzube nke ihe omume a bụ ka ya na-eche banyere ya dị ka ya.
“Nke ahụ dị mma. Ị na-arụ ọrụ.”
Ọ adaha ya. N'ihi ya, ọ asụwo ude na ọ gara na ya.
“M buru Sid elu e mesịrị, nri?”
Ọ hulatara. “M nwere a nzukọ. Ya mere, ekele.”
“Chọpụta, ọ bụ ọrụ m.” M ga-akwụ ụgwọ ị ka m bulie Sid.
Mgbe ahụ Daniel kwuru, “Ọ bụ ihe ịtụnanya na ndị mmadụ na dị ka ndị a nkịta. Ha na-adọrọ mmasị, ma ha adịghị ozi kpọtara. Ha na-dị ka nwere nwa bebi.”
“Yeah, ọma, ndị mmadụ na-arịa ọrịa,” kwuru Nina.
Ọ gbatịa na anya na ya. “Ha bụ,” o kwuru, sị, dị ka anya ya squinted dị ka ma ọ bụrụ na-agbalị ịhụ ya nso. “Ha mekpuru.”
Ọ na-e aback. “Ha na-eleta,” o kwuru, njọ.
“Oh ha?” Ọ zụrụ ya nku anya, na-eche echiche nke ya na Mr. Chandler si, nke aha ya na ya na kọmputa.
“Ha na-edina,” kwuru Nina, eche echiche banyere ihe mere o ji, a ọkàiwu, ga-ikpọ anabata Enyemaka. Chandler ke akpa itie.
“Ha na-awakpo ndị mmadụ na nzuzo.”
“Kpọmkwem,” Nina kwetara.
Ha lee anya onye ọ bụla ọzọ. The nkịta na-na-na ụjọ. Annie e sniffing Sid si butt na Moe e sniffing Annie si butt ma Sid nweghị mmasị na sniffing onye ọ bụla butt. Ọ dị nnọọ chọrọ iji na-enweta hell n'ebe ndị a dị nta na-acha ọcha ratdogs ka anya dị ka o kwere omume.
“Ị mma na-aga,” Nina kwuru. “Sid dịghị anya kwa obi ụtọ.”
Sid nọ na-ekwusa ezé ya na-aba mba, ya hackles elu, ya ọdụ na a akwụsị.
“Ọ bụ ezi. Na-eje ije na m,” kwuru Daniel. “Bịanụ.”
“Bịanụ!” Ọ bụ isi ike.
Ha wee na-eje ije, gburugburu esite ọnụ na iri na abuo nkịta, Daniel na-ejide Sid ya n'èzí aka.
“Gwa m,” o kwuru, sị. “Gịnị mere i na-eje ije nkịta?”
“Gịnị mere? Gịnị ka m kwesịrị ịdị na-eme? A n'ezie ọrụ? Ọ bụ ihe ị na-eche?”
Ọ tụpụrụghị ya defensivness. “Ọfọn, i mgbe a na nkịta walker?”
“Gịnị mere, ihe ọjọọ na ịbụ a nkịta walker?” Gịnị mere onye ọ bụla iche na nkịta na-eje ije bụ ihe unu na-eme mgbe gwụsịrị na ihe ị na-achọ ka a na-eme.
“Emela, M”m nnọọ ọchịchọ ịmata. Ọ bụghị na na na na?”
“Dị nnọọ ihe a afọ. Ndo. Enyi m, Clear, nwere gaa L.A. nwa oge, otú ahụ ka m ada n'elu ya, nwa oge.
“Ọ bụghị otú ahụ nwa oge, afọ a-ogologo oge ọrụ. Ebee ka ị na-arụ ọrụ tupu?”
“Ị nyere ya maka nke a?”
“Ndi bụghị ọtụtụ nye elu. Ewezuga mama m. M wee pụọ ya na-etu ọnụ ikike.”
“Ị na a egwu nwa nwaanyị.”
O nwere anya na ya ga-ahụ ma ọ bụrụ na ọ na-egwu egwu ma ọ bụ. Ọ bụ. Ọ mụmụrụ ọnụ ọchị azụ ya.
“Ị ga-eme ezi ihe ụfọdụ ego. Ịtụle ihe m ga-akwụ gị, na ọtụtụ na site otú ọtụtụ? Ị nza nke nkịta, nri? Ma ọ bụ ihe niile ego, nri?”
“M na-eme mma.”
“Otu niile ego azụmahịa. Nke ahụ bụ ihe ọ bụla taxpayer kwesịrị na-enweghị.”
“Na ihe banyere gị? Ị na a lava–?” Ọ gbalịrị ịkwụsị onwe ya ma ọ bụ akaha.
Anya ya ghọrọ mkpa slits na ọ mụmụrụ ọnụ ọchị. “Ị nwere ike ikwu na ọ. Ọ bụghị ihe ọjọọ okwu. Tinyegharịa mgbe m: ọkàiwu. Bịanụ.”
“Onye ọkikpe,” o kwuru, sị na ha abụọ na-achị ọchị.
“How'd ị maara?” ọ jụrụ, ezie, ọ maara nke ọma otú ọ maara.
“Ọfọn, a, M, dị nnọọ a maa. Ị dị ka a ọkàiwu. Sid bụ ụdị nkịta a ọkàiwu ga-. Gị ulo, ọma, ihe m na na hụrụ ya, anya dị ka ụdị ebe a ọkàiwu ga-adị ndụ.”
“Site na ihe ị hụrụ bụ mkpa nkebiahiri nke ikpe.”
“Gị zo obom.”
'Donët echefu m ime ụlọ ịwụ, na–“
“Nke ahụ bụ na ọ! Ahụghị m–“
“The paseeji si zo obom ime ụlọ ịwụ, oh na ime i nwere na-eje ije site na iji na-asa ahụ.”
O nwere iji kwụsị ya. Ka ibugharịa ya. “Yeah, ọ bụ okpokoro ịwụ, ịsa na ụlọ mposi. Ha bụ ndị nwụrụ anwụ giveaways. Ha kwuru, sị 'ọkàiwu’ ha nile.” Ọ chịrị ọchị ọzọ. “M chefuo banyere ụlọ ịwụ.”
“Hmmm. Ọ bụghị m,” o kwuru, sị ọchị.
Ugbu a elu n'ebe ọwụwa anyanwụ na-eru nso uzo n'ebe ọdịda anyanwụ, nkịta ji obi ụtọ na ụzọ ha n'ụlọ, Nina na Daniel bịara daa a na-eje ije uzo. Ọ bụ nkeji tupu ma n'ime ha kwuru.
“Na m trombone,” kwuru Daniel.
“My trombone, M kwuru.”
Nina ji ike na-eche n'obi-ya na-eti dị ka a drum na a Jazz quartet. “Ị, a, play trombone?”
O lere ya n'ihi na a nkeji, na ihe ọ bụla. Mgbe ahụ, mgbe ihe yiri awa, ọ jụrụ, “-Amasị gị Jazz?” jụrụ Daniel.
“Chọpụta, ee. Echere m.” N'obi-ya siri nime ya site ọnyà bass. Ọ ma aga na-ajụ ya ma ọ bụ chọta ya.
“I chere na ị ga-amasị m gaa ịnụ Mia Hampton? Ọ bụ na Vanguard na arụ orụ di a ike trombone. Ị na-amasị trombone, ị chọghị.”
Ọ na-ajụ ya dị ka a ajụjụ, n'ihi ya, ọ azaghị. “Enweghị m echiche e nwere ndị kpakpando Jazz trombonists.”
“E nwere stellar trombonists ma, ọ dịghị kpakpando. Opi, saxes, n'ezie, ma trombones mgbe enwetatụbeghị ha ruru. The trombone bụ ihe ndị anya na mpi. Chọpụta, French mpi nwere oge gboo music, tubas nwere eje ije na ìgwè ndị agha, na N'ezie opi na saxes n'ebe nile, mgbe niile. Ma trombone? Ọ bụ chefuo mpi, jụụ, soulful, nwanna nwoke ime mmụọ nke na-afụ opi.”
Ọ nọ na mesmerized ya ahuhu.
“Ya mere, ị chọrọ ịga na-anụ otu? N'ezie ise? Hampton si na-etinye ọnụ a trombone quintet. Ọ na-aga na-ihe. M chere na ebe ọ bụ na i nwere ụdị mmasị ahụ, ọma, ị pụrụ iji na-abịa.”
“Ọfọn, yeah, n'aka, ma, M pụtara m na-eme n'ezie haveÖ”
“Tonight?” Ọ na-eche maka a nkeji ma na-echeta ihe. Ọ kụrụ ya onwe ya na ya na hip. “Aw, emela, M ike n'abalị a.” Claire-abịa n'elu na ọ ga-mgbe ịkagbu a enyi a Ihọd. Ọbụna a Ihọd.
“Na na na, otú banyere echi? Ha ga-abụ na a ụbọchị ole na ole. Mbụ set bụ na itoolu. Anyị nwere ike iri mbụ.”
Oh Chineke. Oh jeez. Oh ee! Anyanwụ dị nnọọ awaala treetops na ọ pụrụ mmetụta ya ịhụnanya ya ihu. The nkịta na-eji obi ụtọ sniffing ọhụrụ ụtụtụ ikuku na ọ bụrụ na ọ na-amaghị mma, nke a bụ ndụ! Nke a bụ a zuru okè zuru okè ụtụtụ. Lee! Lee! Life odomo na ntabi.
“Ọfọn,” nile o nwere ike na-ekwu.
Ha ruru n'ebe ọwụwa anyanwụ.
“Ọ bụ na a 'ọma, ee, '?”
“Ọfọn, dịkwa mma,” ọ zara articulately.
“Aga m ewere na a ee. M ga-eburu gị?”
O nwere na-eche echiche ngwa ngwa, otú chọrọ izere mbụ 'ụbọchị’ usoro nke bụ nsusu, ya na-ekwu okwu, ọnwụ. “Enwere m ike izute gị e?”
“Chọpụta, ị maara ebe ọ bụ? Seventh na iri na otu, n'ebe ugwu, obere ebe. Seven-iri atọ dịkwa mma?”
“asaa na iri na otu?” Ọ flushed na ihere na n'amaghị obodo.
“Seventh Okporo ụzọ na iri na otu Street.” Ọ mụmụrụ ọnụ ọchị.
Ọ hulatara ya iji gosi ya ọ na-esonụ. “Mgbe asaa na iri atọ,” ọ ugboro ugboro, na obi ụtọ, na-atụ egwu, ọnụ stupor.
“Ezi. Ugbu a, m na-aga. Ụfọdụ n'ime anyị na-arụ ọrụ dị ndụ, ị mara.” Ọ mụmụrụ ọnụ ọchị, njakịrị. “Na-egwu egwu!” Mgbe ahụ, ọ metụrụ ya aka na aka ya. “Ga-ahụ gị echi, nri? A n'abalị nke trombones.”
Ọ metụrụ ntụpọ ọ dị nnọọ metụrụ, na kwuru, “Yeah.” Ọ na-a ụbọchị-o-moron, a ụbọchị-a-phobe, ụbọchị aka. Ọ na-etinye oge Daniel na ndị kasị elu pedestal mara ụmụ mmadụ, fọrọ nke nta dị elu dị ka Ugwu Everest, na ọ bụ ike ume na mkpa ikuku n'ebe. Ọ pụrụ ọbụna-eyi ndụ egwu. Otu aghara nzọụkwụ na i nwere ike ịhụ onwe gị na-ada. Na ịhụnanya na / ma ọ bụ ka gị na ọnwụ.
O wee tụgharịa ogbe ndịda na Sid na malitere na-agba ọsọ ma ngwa ngwa nke n'anya. Ma Nina nwere oge zuru ezu na-atụgharị, ma na-ekiri ya ahu akwaga ya nịịka, ya muscular ụkwụ na n'ubu, ma na-a ume ma na-ka ya, emechi ya anya, hụrụ ya na-ejide ya na isusu ọnụ na ya na n
Ma, ya na-acha ọcha doggie battalion wetara ya azụ nsụhọ ha nile na ike, na ha bụ ndị na ụzọ ha n'ụlọ.
Ọ efehe dị ka ifufe, dị ka ma ọ bụrụ na ọ na-ama na-agba ọsọ ya ise kilomita. O chere na elu, ezie na o siri ike maara ihe na-adị ya ka, ọ nọwo na mahadum ebe ọ òkè. O nwere obi ụtọ, ezie na o siri ike maara ihe na-adị ya ka, ọ nọwo otú ahụ ogologo oge ebe ọ ka ya onwe ya na-eche. Ma ọ bụ otú ahụ a nwanyị ala ọzọ, Billy nọ na-eche. Ma ebube, e na ndị na-acha ọcha nkịta. Ihe banyere ya, ya ike aka, ya mara mma anya, ọnụ na ya, na-atụghị anya vulnerability, na openness, ihe kụọ ya. Oh nwata, a agaghị na-eme, ọ bụ? Ọ bụghị ugbu a, ọ bụghị dị ka Daniel, bụghị na a nutty nwa agbọghọ onye a veritable Peeping Tom na a tax evader, buut. Ọ na-ma na-aga na-ada na ịhụnanya na ya ma ọ bụ nwere ijide ya ma ọ bụ abụọ. Na oge ikpeazụ na happenedóthe ada ke ima ihe, bụghị ijide thingóit niile biri nnọọ merụsịrị. Na na bụ dị ka onwe ya. Chere ruo mgbe ọ na-amụta, ọ bụrụ na ọ na-akawanye na anya, onye ọ bụ n'ezie na ihe ọ na n'ezie. A ọkàiwu ọjọọ ezuru. Ma, otu IRS gị n'ụlọnga? Site n'ahụmahụ na ọ maara na maara tupu bụ ihe na nwaanyị nwere ike ina-agba nkịtị ka, ma a na-idem na ọ bụ ihe ọ gaghị gafere.
Ma eleghị anya, ọ na-apụ na ya nanị n'ihi na ọ na-eche na ọ bụ Daniel! ọ na-eche. The Daniel na photos, na nkwafu ulo, zuru okè nkịta?
Oleekwa otú ọ mara Daniel bụ ọkàiwu, agbanyeghị? Ma eleghị anya, na bigmouth doorman Pete gwara ya. Ma ọ bụ ọzọ ọ na-agụ ya ụfọdụ akụkọ ma ọ bụ ozi ma ọ bụ ọtụtụ ihe na ulo nke ga-na e nyere ya. Ezi ihe ọ bụ ya mere kpachara anya ka zoo ya ezigbo ọrụ na njirimara. Enye ama ke kaboodu. Ọ meghere trombone ikpe. Ọ fụrụ ya ọnụ na-ekwuru. Ọ sara ya tub. Ònye maara ihe a Nina bụ ike nke? Ndi enye ama enweghị ókè?
All ọ maara bụ na oge ọzọ, ọ chọrọ ka ọ na-na okpokoro ịwụ ya na ya.
Site na mgbe Nina ama ije nkịta na mgbe ahụ enwetatụbeghị ha n'ụlọ, ụkwụ ya na-agba ọbara si asaa dị iche iche ebe. Atọ na ụkwụ aka nri na anọ na ekpe. Ọ nọdụrụ na nsọtụ nke ya bed, na-eche echiche ihe onye iberibe ọ bụ, mgbe itinye hydrogen peroxide na ìgwè ọrịa AIDS, dị ka Sam dutifully rachara N'ala nke ụkwụ ya. Yeah Daniel hụrụ heróyou'd nwere na-Helen Keller bụghị toóbut ọ maara banyere saa. Ọ maara banyere trombone.
Ma ọ ahụ n'ezie jụrụ ya. Na o mere nke na-eme. Ugbu a adịghị ịfụ ya, o kwuru, sị oké ma ọ bụrụ na ọ bụ nne ya, na-ezo aka na ụbọchị, bụghị trombone.
Ọ kpọọrọ a miri emi ume na, agbalị icheta na t-uwe elu ya kaboodu ya musky senti.